Nkọwa:Chevrolet Car Remote Fob Key Shell,Chevrolet Skin Car Fob Key Case,Akpa ugbo ala ugbua
Home > Ngwaahịa > Cover Cover Silicone Key Chevrolet > Chevrolet Skin ụgbọ ala na-ekpuchi isi mkpuchi akpa akpa
Ihe Nlereanya.: Chevrolet 2
Anyị mara mma ụwa co, Ltd nwere ụlọ ọrụ anyị ma na-elekwasị anya na-emepụta fob na- echepụta silicon ala isi okwu maka 7 afọ. Ugbu a, okwu igwe ala ụgbọ ala ahụ anyị na-emepụta bụ ihe mara mma, na-adịgide adịgide. Chevrolet Silicone Key Cover bụ otu n'ime ngwaahịa kacha mma ị na-ere maka mkpụrụ osisi silb n'ihi na ọ na-emetụ ya aka, na-adịghị mma, na-enwe mmasị na gburugburu ebe obibi. ụzọ kachasị mma ejiji ụgbọ ala na-achọkarị ebe ọ bụ na ọ dị elu na mba Europe. Anyị nwere obi ike na ị ga-enwe afọ ojuju maka igwe mgbagwoju anya 2 anyị na- ejikwa kọlọtọ kọmịlị, njide ihe ntinye ụgbọ ala.
Onye ọ bụla kristal gel ụgbọ ala shea nwere soro atụmatụ:
2. The omenala ụgbọ ala isi sịlịkọn shei bụ n'ụzọ zuru okè kwesịrị ekwesị n'ihi na gị Chevrolet ụgbọ ala isi.
4. Anyị nwere uru ọnụahịa nke mkpụrụedemede isi mkpụrụedemede maka ụgbọala ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu.
6. Onye na- ejide ụgbọ mkpịsị uhie nwere àgwà ndị na-adịghị emerụ ahụ, gburugburu ebe obibi, mmegide okpomọkụ, ihe na-adịgide adịgide, mmiri na-adịghị ahụkebe, nkwupụta uzuzu.
Ngwongwo ugbo - Chevrolet Skin Car Fob Key Case -bụ ọ dịghị nsogbu na environmentally friendly.When ị jide a Skin Car Remote Fob Key Case n'aka gị, ọ na-adị nro, dị mma na ìhè. Ị ga-ahụ Chevrolet logo 2 bọtịnụ bọtịnụ ụgbọala mgbe ị nwere ya.
Chevrolet Car Remote Fob Key Shell Chevrolet Skin Car Fob Key Case Akpa ugbo ala ugbua Chevrolet Remote Key Shell Chevrolet Car Key Fob Shell Chevrolet Smart Key Shell Embossed Chevrolet Remote Key Shell Chevrolet Remote Key Case